Mpanamboatra milina fitoeran-plastika - mpamatsy milina fitoeran-jiro plastika ao Shina
LQ250-300PE Tsipika pelletizing dingana roa
Famaritana antsipirian'ny fehikibo fehikibo 1. sakany mahomby: 600mm 2.Fotoan'ny motera: efitrano fanangonam-bokatra 1.5KW 1.Fotoan'ny motera: 45KW 2.Total volume: 200L 3.Afom-bokatra mahomby: 150L 4.Atim-pifandraisana: 9 5.Filetra miorina: 12 6 Hafainganam-pandeha .Bilades rotation: 900RPM LQ-SJ85 / 28 Extruder Driving motor: 55 KW, AC motera (SIMENS China) Screw: Diameter an'ny visy: 85mm, L / D: 28/1 Fitaovana visy: 38CrMoAl Fitsaboana ambonin'ny tany: Barrel fanodinana Nitriding : Fanodinana anaty: ...
LQ-HY61 / 62B 66 / 76B Plastika Semi mandeha ho azy (BOPS)
Ity tanteraka milina thermoforming plastika mandeha ho azy dia fitambaran'ny singa mekanika, herinaratra ary pneumatic, ary ny rafitra iray manontolo dia fehezin'ny micro PLC, izay azo alefa amin'ny fifandraisan'olombelona. Izy io dia manambatra ny famahanana ara-nofo, ny fanafanana, ny famolavolana, ny fanapahana ary ny fametrahana azy amin'ny dingana iray.，PLA horonan-taratasy vita amin'ny plastika miforona ho sarony isan-karazany, lovia, lovia, akamaso sy vokatra hafa, toy ny sarony boatin-tsakafo, rakotra sushi, fonosana vilia taratasy, fonosana vita amin'ny aluminium, fantsom-boankazo volana, lovia mofomamy, lovia sakafo, fitoeram-pivarotana lehibe, rano am-bava fitoeram-pako, lovia fampidirana fanafody.
LQ-HY-3021 Milina thermoforming tsara sy ratsy
Dingan-pamokarana: Hevitra lehibe: ■ Mety amin'ny plastika PP, APET, PVC, PLA, BOPS, plastika PS; ■ Ny famahanana, ny fananganana, ny fanapahana ary ny fametahana dia entin'ny motera servo; ■ Famahanana, fananganana, fanodinana in-bobongolo ary fanodinana stacking dia famokarana tanteraka ho azy; ■ Hamolavola amin'ny fitaovana fanovana haingana, fikojakojana mora; ■ Miforona amin'ny tsindry rivotra 7bar sy ny banga; ■ Rafitra fametahana roa azo isafidianana ； Famaritana: Model LQ-HY-3021 Max Forming Area 760 * 540mm Max Form ...
LQ-HY-54/76 Masinina Thermoforming mandeha ho azy
Endri-javatra: famaritana fitaovana mety PET / PS / BOPS / HIPS / PVC / PLA mandrafitra faritra 540 × 760mm mandrafitra ny halalin'ny 120mm Clamping Force 90 Ton Sheet Thickness Range 0.10-1.0 mm Max. Sheet Roll Diameter 710mm Max.Sheet Width 810mm Air Pressure 0.7 Mpa Fanjifana rano 6 litatra / min Fanjifana rivotra 1300 litatra / min Fanjifana herinaratra 9kw / ora (eo ho eo) Hafaingam-pamokarana 600-1200 fanodinana / ora Tetezana Tri-phase, AC380 ...